🥇 Ukubalwa kwemali nokuhlelwa kwezinto zokuhamba
Isilinganiso: 4.9. Inani lezinhlangano: 974
Ividiyo yokubalwa kwemali nokuhlelwa kwezinto zokuhamba
Oda ukubalwa kwemali nokuhlelwa kwezinto zokuhamba
Uhlelo lwe-USU-Soft automation cargo transportations management uhlelo oluxazulula imisebenzi eminingana ebalulekile ngasikhathi sinye. Kuyasiza ukukhulisa umsebenzi wenhlangano ngokwenza ngokuzenzakalela izici zayo zebhizinisi. Isoftware yenza ukubalwa kwezimali kanye nokugcina impahla ngokuzenzakalela, futhi umsebenzi onemibhalo ube lula futhi usheshe. Isenzo ngasinye salo lonke uchwepheshe wenkampani siyarekhodwa ohlelweni lokubalwa kwemali kwenhlangano, bese siqoqwa futhi sihlaziywe maqondana nezinye izenzo. Lesi yisisekelo sokuhlaziywa okujulile okuhleliwe, idatha ebaluleke kakhulu ezinqumweni zokuphatha ezifanele. Uhlelo lokubalwa kwemali oluvela enkampanini yethu nakanjani luzosiza ukuphathwa kwenhlangano yakho. Eqinisweni, ikunikeza ukugeleza kokusebenza kolwazi mayelana nakho konke okwenzekayo ebhizinisini lakho. Ukuthuthwa kwezimpahla uhlobo olukhethekile lwezinsizakalo zokuthutha. Ukuze uzenze zibize kakhulu futhi zinenzuzo, udinga ukunaka umkhuba ngamunye. Uma inhlangano inamamephu angahlelwanga kahle emizila, izindlela zokuthuthwa kwempahla zizosetshenziswa ngokungenangqondo, futhi izindleko zizokwenyuka. Uma kungekho lawulo, amaloli ngokuvamile angasebenza noma asetshenziselwe ukukhiqiza abasebenzi imali engenayo ngokungemthetho. Ezokuthutha kufanele zihlelwe ngokusobala, futhi uhlelo lokulawulwa kokubalwa kwemali lungasiza kulokhu.
Uhlelo lokulawulwa kokuthuthwa kwempahla ezenzakalelayo lwe-accounting accounting yithuba lokugcina ubudlelwane obuhle kakhulu namakhasimende, ukutadisha okufunwayo nezifiso zabo. Uhlelo lokubalwa kwemali kwenhlangano lungahlaziya izimpahla, izinkontileka, futhi alusoze lwakuvumela ukuthi wephule imigomo yenkontileka, ngokuya ngekhwalithi yesevisi, noma ngokwesikhathi. Ukulethwa kwempahla ngayinye kuzoba nomsebenzi obhekele kahle oqinisekisa ukuthi umthwalo ngamunye uzothunyelwa futhi wamukelwe ngesikhathi. Ukwakhiwa kwezinhlelo zokulawula ukuthuthwa kwemigwaqo yezimpahla kwaqala ngasekupheleni kwekhulu leminyaka elidlule. Futhi ekuqaleni babeyizinhlelo ezinhle zasendulo. Ngokuthuthukiswa kwezokuxhumana ngezimoto, ukugcwala kwemakethe ngezokuthutha, izidingo zohlelo lokubalwa kwemali lokulawulwa kwenhlangano nazo zishintshile. Namuhla, ebhizinisini lezimpahla, umuntu akakwazi ukwenza ngaphandle kohlelo olunamandla, olukhiqizayo lokuhlelwa kwezimali kwenhlangano olungaletha ngokuqonde ukuhleleka kukho konke.
Yini uhlelo lokuphatha olungayinikeza yonke inhlangano yezimpahla ngaphezu kokulawula okuzenzakalelayo kokuthuthwa kwemigwaqo nempahla? Okokuqala, ikhwalithi yensizakalo iyakhula, futhi amaklayenti akubona lokhu ngokushesha okukhulu. Ukwenziwa ngcono kwezindleko zokuhamba kufinyelela ku-25% vele phakathi nezinyanga eziyisithupha zokuqala zokusebenzisa uhlelo oluzenzakalelayo. Isikhathi esithathayo ukuzulazula ochungechungeni lwezimpahla sincishiswa inani elifanayo. Uhlelo oluzenzakalelayo lokubalwa kwezimali lwenhlangano lukuvumela ukuthi wehlise ibanga lezithuthi zomgwaqo cishe nge-15%, futhi inqubo yokuhlela ukulethwa yehliswe ngama-95%. Isoftware isiza ukwenza ukuphathwa kusebenze, ngoba empeleni izophendula imibuzo eminingi evame ukubuzwa ngochwepheshe emkhakheni wezokuphathwa kwezokuthutha - kuthatha isikhathi esingakanani ukuhlela umzila nokuhlela ukulethwa kwempahla? Ungazinciphisa kanjani izindleko zokuhamba emigwaqweni, ngenkathi ukwandisa inzuzo yezinsizakalo? Yini ezuzisa kakhulu - ukusebenzisa izinsizakusebenza zezimoto zakho noma ukusebenzisa izinsizakalo zezokuthutha zomlingani wakho? Ingabe yonke inethiwekhi iyasebenza, futhi ingabe umdlalo ulifanele ikhandlela?
Umsebenzi ozenzakalelayo awukho ngokusetshenziswa kwama-spreadsheet e-Excel njengoba abanye abantu becabanga. Ukuzenzekelayo kwangempela kwenziwa ngokusebenzisa uhlelo oluthuthukile. Futhi kufanele isheshe, inembe, ingaphazanyiswa, isebenze kahle, ithembeke, iqinisekise isivinini esikhulu sezibalo. Inqubo yokuyisebenzisa akudingeki ibe nzima; sikhetha izixhumi ezibonakalayo ezingalayishiwe ngeziphazamiso ezingadingekile. Olunye lwezinhlelo ezinhle kakhulu zokubalwa kwempahla yizimpahla yi-USU-Soft. Idalwe ngonjiniyela abanolwazi abazame ukucubungula inani eliphezulu lezidingo nezici zalezi zinhlobo zezinto zokuhamba, ngakho-ke uhlelo lokubalwa kwenhlangano luhle kakhulu ekuqapheleni nasekusebenziseni izinqubo zezokuthutha lapho usebenza nempahla yezokuthutha kanye nemigwaqo. Uhlelo oluzenzakalelayo lwe-USU-Soft lwenza lula ukuhlelwa kwemizila, kucatshangelwa zonke izici - kusukela esikhathini esabiwe kuya kuhlobo lwempahla. Kuzokusiza ukuthola imibiko nganoma yisiphi isikhathi. Ukubalwa kwemali okuzenzakalelayo nokulawulwa kwezezimali, indawo yokugcina izinto ezenzakalelayo, kanye nokuhamba kwedokhumenti - lokhu kumane kuyingxenye yokusebenza okunothile nobanzi kohlelo lwe-USU-Soft lwe-accounting accounting. Inqubo yokuhambisa ezokuthutha iyashesha, ngoba ukuhamba kwemoto ngayinye kulula ukuyilandela.
Uhlelo oluzenzakalelayo lokulawula lwehlisa umthwalo womsebenzi kubasebenzi ngokunciphisa inani lezenzo ezijwayelekile zokuphoqelela. Noma imuphi umsebenzi kusuka ekuhleleni insiza uye ekuqalisweni kwayo nakanjani uzoshesha. Uhlelo lusiza ukwenza ngcono ukuphathwa kwezinqubo zokuhamba. Ngeke kusathatha isikhathi esiningi ukuthi inkampani ibe ngumholi esigabeni sayo, futhi maqondana nekhwalithi yokulethwa kwezimpahla, uqinisekile ukuthi ngeke uqhathaniswe. Ngasikhathi sinye, uhlelo lokulawula ngeke lonakalise isabelomali senkampani. Akunasidingo sokuyikhokhela imali yokubhalisa, ngoba izindleko zelayisense zanele impela.
Isoftware yakha imininingwane yolwazi yamakhasimende enemininingwane eminingi futhi enembile ngencazelo yenkontileka ngayinye nempahla ngayinye ethunyelwe ngaphambili. Lokhu kusiza ukuxhumana okwenziwe ngezifiso nekhasimende ngalinye. Uhlelo lwe-accounting accounting lusiza ukwenza ngcono izinto inkampani ezithengela izidingo zayo. Izokhombisa izindleko, izidingo, izimo ezihamba phambili zabahlinzeki ukunikeza inkampani yezimoto ithuba lokwehlisa izindleko. Ukulawula endaweni yokugcina impahla kuzosiza ukuthunyelwa nokulayishwa ngesikhathi futhi kucatshangelwe ukuhamba kwengxenye ngayinye yokugcina, uphethiloli. Izisetshenziswa zamaselula zamadivayisi kagesi, ezingakhetha ukwengeza uhlelo lwekhompyutha, zizosiza ezindabeni zerimothi, kanye nokwenza ukuxhumana phakathi kwabasebenzi benkampani namakhasimende ezinsizakalo zezimpahla kube lula. Ungafunda kabanzi mayelana nokuhlukahluka kwebhizinisi lezimoto, izindlela zokwandisa ukuthuthwa kwempahla eBhayibhelini lomholi wanamuhla. Uhlobo lwayo olusha luzosiza umqondisi ukuhola ibhizinisi liye empumelelweni.